Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi fataax iyo Suldaan Wali waa la cunay Cabdi ileyna kawaankuu saaranyahay
Cabdi fataax iyo Suldaan Wali waa la cunay Cabdi ileyna kawaankuu saaranyahay
Warar aan ka helnay ilo-xogogaal ah oo xafiiska Cabdi iley ku sugan ayaa noo soo tabiyay goor dhaweyd in laga qaaday dhamaan xilalkii ay u hayeen xisbi ku sheega ESPDP iyadoo warar kale ay sheegayaan inuu Ina Iley qudhiisu kawaanka saran yahay.
Sanadihii la soo dhaafay wuxuu Cabdi fataax ku magacawnaa gudoomiyaha xisbi ku sheega ESPDP ay abaabuleen EPRDF-tu ee lugooyada shacabka loogu talagalay halka uu ku xigeenka koobaadna ka ahaa Suldaan wali.
Cabdi fataax ayaa ilaa iyo 2003dii ahaa xubnaha oogu firficoon maamulka gumaysiga uu dhigtay Jigjiga iyadoo Dr.Suldaan Wali-na uu sanooyinkii u dambeeyay madax ka ahaa xafiiska Biyaha oo mashaariicda ugu badan qaata. Khilaafka Cabdifataax iyo Cabdi iley ayaa ka bilowday socdaalkii labadooda loogu soo diray dibadaha, kolkaasuu uu aad uga maagay dhaqan xumada Cabdi iley iyo aqoondaradiisa, halka uu Cabdi iley uga shakiyay inuu dacwada badan oo laga geeyay Addisababa uu isaga ku lug lahaa.
Warar la hubo ayaa sheegaya in Cabdi ilay oo ilaa hadda ka baxsaday shirqoolo badan oo loo dhigay isagoo marwalba ka dhigta damaanad laynta shacabka iyo lacagta xad dhaafka ahee uu siiyo saraakiisha xaaraan quudatada ah, ayaa laga yaabaa in lagu eryo shirarka ilaa hadda u socda guamsyi kalkaalka.
Warka kama dabeeysta ah waxaan heli doonaa marka laga soo dareero shirka. Waxaana hadda si ku-meel gaadh ah loogu badalay Cabdi fataax oo shirka gudoominaya afhayeenka xisbiga lugooyada Mahamed rashiid Isaaq.
ONA /Jigjiga hoolka shirka
waa lagu sugay, shirqoolka ay gumaysiga ku maaweelinayaanna wuu soo dhamaaday, balse waxaa la yaab leh halka ina iley uu ku danbayn doono?!
kkkkkkkkkkkkkk ma ah su aal dhib badan waad garan waa halkii aya maren kuwii hore
Jidwaaq Jigjiga says:
waa ku faraxsanahay Cabdi fataax hadanahay Beelihi ay besha uu ka dhashay babiyay ama uu xasuqay isga iyo Cabdi iley waxan sugayna ninka sida dhabta ah u waalan, Cabdi Iley,